Baahin: Axad, Jan 22, C/fitaax C. Geedi ~ Daljir ~ Galkacyo. 2 eedaysane oo loo haystay dilka taliyihii cidanka PSU-da sannadkii hore oo toogasho lagu xukumay; Mudaaharaad lagu diiday Khaatumo, laguna taageeray Somaliland, oo ka dhacay Hargeysa & Burco; Dawlada federaalka oo soo dhawaysay dilka Bilaal Al-barjaawi; Al-shabaab oo qiray dilkiisa; Wariye shalay laga afduubay xaafada Wadajir ee Galkacyo oo lala aaday Hobyo. – Radio Daljir
Baahin: Axad, Jan 22, C/fitaax C. Geedi ~ Daljir ~ Galkacyo. 2 eedaysane oo loo haystay dilka taliyihii cidanka PSU-da sannadkii hore oo toogasho lagu xukumay; Mudaaharaad lagu diiday Khaatumo, laguna taageeray Somaliland, oo ka dhacay Hargeysa & Burco; Dawlada federaalka oo soo dhawaysay dilka Bilaal Al-barjaawi; Al-shabaab oo qiray dilkiisa; Wariye shalay laga afduubay xaafada Wadajir ee Galkacyo oo lala aaday Hobyo.